किन युक्रेन रुसका लागि यति महत्त्वपूर्ण छ ? जान्नुहोस् ३ कारणहरू
किन युक्रेन रुसका लागि यति महत्त्वपूर्ण छ ? जान्नुहोस् ३ कारणहरू 'युक्रेनको भू-भाग रुसका लागि बफर क्षेत्र हाे'
जनतापाटी बुधबार, माघ १९, २०७८ मा प्रकाशित
एजेन्सी । कतिपयले यसलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको चाहना मान्छन् भने कतिपयले यसलाई नयाँ शीतयुद्धतर्फ अघि बढ्ने प्रयास भनेका छन् । रुस र युक्रेनबीचको तनावले दुई देशबीच सम्भावित युद्धको बारेमा खुलेर कुरा गरिरहेका विश्वभरका विदेश मन्त्रालयहरूमा असहजता उत्पन्न भएको छ ।
रुसले युक्रेनी सीमामा १ लाखभन्दा बढी सेना तैनाथ गरेको छ । यद्यपी, उसले अझै पनि सैन्य आक्रमणको योजना रहेको कुरा अस्वीकार गरिरहेको छ । यसबीच रुसले आफ्नो सुरक्षा मागको सूची नाटोलाई पठाएको छ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नाटोले ‘क्षेत्रीय सुरक्षालाई बेवास्ता’ गरेको खुलेआम आरोप लगाएका छन् । माग पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्य चीजहरूका साथसाथै नाटोले युक्रेन र सोभियत संघका पूर्व घटक राज्यहरूलाई संगठनको सदस्य हुनबाट रोक्नुपर्छ।’
रुस यो चाहन्छ कि सोभियत संघ विघटन भएदेखि नै त्यो गठबन्धनमा सामेल भएका देशका सैनिक र उनीहरूबाट प्राप्त हुने हतियारलाई निश्चित गर्न सकोस् । यससँगै पूर्वी युरोपका मुलुकमा सन् १९९७ पछि बनेका पूर्वाधार हटाउन पनि माग गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फोरेन्सिक र विश्लेषण फर्म जियोपोलिटिकल फ्युचर्सका संस्थापक जर्ज फ्राइडम्यानले रुसको मागलाई ‘शीतयुद्धको समयमा पूर्वी युरोपको सीमानाको रूपमा उनीहरूले चाहेको कुरा’को रूपमा जोड्छन्।
युक्रेनमा रुसको खतराबारे लगातार बोल्दै आएको अमेरिकाले पूर्वी युरोपमा आफ्ना ८ हजार ५ सय सेनालाई अलर्टमा राख्दै आफ्ना युद्धपोत ब्ल्याक सीमा पठाएको छ । योसँगै अमेरिकाले युक्रेनको राजधानी किभमा रहेका आफ्ना कूटनीतिज्ञका आफन्तलाई पनि देश फर्किन निर्देशन दिएको छ ।
यसको विपरित युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमी देशहरूलाई युक्रेनी सीमामा रूसी सेनाको उपस्थितिको बीचमा युद्धबाट नडराउन अपील गरेका छन्। उनले क्रिमियामा रुसी आक्रमण र सन् २०१४ मा करिब १४ हजार मानिस मारिएका पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा रुसी समर्थकको कब्जाबाट संकट सुरु भएको पनि बताएका छन् ।
यसपछि रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र पश्चिमसँगको एक्लोपन झनै् बलियो भयो । यी सबैबीचमा यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ किन युक्रेन रूसको लागि यति महत्त्वपूर्ण छ। यसका पछाडि तीनवटा कारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्।
भर्जिनियाको टेक युनिभर्सिटीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रोफेसर जेरोल्ड टोल भन्छन्, ‘रूसले अहिले जुन नीति अवलम्बन गरिरहेको छ, त्यसको कारणले गर्दा उसले आफ्नो देशको सीमा नजिक रहेको खतरनाक सैन्य गठबन्धनको लागि मञ्च बनिरहेको देखेको छ । रुस युक्रेनलाई नाटो सदस्य बन्न दिन चाहँदैन। ताकी आफ्ना नजिकका देशहरूमा नाटोको मिसाइल र सेना नआओस्।’
जियोपोलिटिकल फ्युचर्सका जर्ज फ्राइडम्यानले सन् १८१२ मा नेपोलियनको आक्रमणको समयदेखि युक्रेनको भू-भागले रुसका लागि बफर क्षेत्रको रूपमा काम गरेको बताउँछन्।
‘युक्रेन रुसको पश्चिमी सिमानामा छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा जब पश्चिमबाट आक्रमण भयो, त्यो युक्रेनको क्षेत्र थियो जहाँबाट उसले आफ्नो रक्षा गर्यो। त्यहाँबाट रुसको राजधानी मस्को १,००० माइल (अर्थात् १६०० किलोमिटर) टाढा छ। यदि युक्रेन नाटोको हातमा जान्छ भने मस्को मात्र ४०० माइल (६४० किलोमिटर) टाढा हुनेछ। त्यसैले युक्रेन एक सुरक्षा क्षेत्र हो जुन तिनीहरू सधैं आफ्नो पास चाहन्छन् किनभने यो नेपोलियनदेखि नै भएको छ।’ फ्राइडम्यानले भने ।
टोल बताउँछन्, ‘रसियामा यस्तो धारणा छ कि युक्रेन शत्रुहरूको गठबन्धनले घेरिएको छ, जुन यस महाशक्तिको लागि चिन्ताको विषय हो।’ यस संकटको सुरुवातपछि रुसी उपविदेशमन्त्रीले १९६२ मिसाइल संकटलाई उल्लेख गरे र पछि रूसले क्युबा र भेनेजुएलामा सैन्य बल तैनाथ गर्न सक्ने टिप्पणी गरे।
टोल भन्छन्, ‘अमेरिकाको आफ्नै मोनरो सिद्धान्त छ, आफ्नो देशको वरिपरि शत्रु सेनाको उपस्थितिको बारेमा चिन्ता छ भन्ने कुरामा जोड दिन उनीहरूले यो गरेका थिए, त्यसैले रुसले त्यसो भन्नु जायज छ।’
ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध
१२ जुलाई २०२१ मा युक्रेनसँगको सम्बन्धमा विस्तृत लेखमा भ्लादिमिर पुटिनले लेखेका थिए, ‘छिमेकी देश खतरनाक खेलमा फसेको छ, युरोप र रूसबीचको अवरोध बनिरहेको छ।’
पुटिनले क्षेत्रको सुरक्षा र राजनीतिलाई मात्र नभई रुस र युक्रेन दुवैको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि औंल्याएका थिए। यसबारे उनले व्यापक रूपमा लेखेका छन् ।
राष्ट्रपतिले यो पनि लेखे ‘अन्य चीजहरूबीच बेलारुस, रूस र युक्रेनका पुर्खाहरू साझा थिए।’ उनले रुस र युक्रेनका जनता एउटै हो भनी तर्क गर्न ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेखेका थिए। टोल भन्छन्, ‘पुटिनको विचारमा इतिहास, संस्कृति र पहिचानबारे धेरै कुरा थियो।’
रूसले युक्रेनलाई अर्को देशको रूपमा हेर्दैन। पुटिनको दृष्टिकोणले युक्रेनलाई बहु-स्लाभिक राष्ट्र मान्दछ। एकै समयमा यसलाई रूसको मुटु पनि मान्छन्, पुटिन। यो युक्रेनमा रूसको धेरै शक्तिशाली दृष्टिकोण हो, जो यसको मूल पहिचानमा जरा छ।
टोल भन्छन्, ‘जब युक्रेनले आफूलाई रुसविरोधी देशको रूपमा चिनाउँछ, त्यहाँ (रुसमा) धेरै तीव्र भावना हुन्छ। यसबारे रसियामा धेरै आक्रोश र निराशा छ, किनकि यो धोकाबाट जन्मिएको हो। एक भाइ।’
जर्ज फ्राइडम्यानले सांस्कृतिक वा ऐतिहासिक रूपमा युक्रेनको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्दै रसियाको मुख्य चासो यसको आफ्नै भूराजनीतिक स्थिति रहेको बताए ।
उनी भन्छन्, ‘हो, उनीहरूले इतिहास साझा गरेका छन् । ऐतिहासिक रूपमा युक्रेनीहरू रुसीहरूले उत्पीडन गरेका छन्। सोभियत संघको समयमा एक भयानक अनिकाल थियो, जब लाखौं मानिसहरू मरे र यो त्यतिबेला भयो। जब रूसले त्यहाँ उब्जाएको अन्न निर्यात गर्थो। रुसी र युक्रेनी जनताबीचको एकताको वार्ता बकवास हो।’
युरोपेली परिषद्को विदेश मामिलाका विश्लेषक काद्री लेइकले बीबीसीलाई गत वर्ष एक अन्तर्वार्तामा युक्रेन मुद्दामा रुसी राष्ट्रपति पुटिनको व्यक्तिगत भावना रहेको बताएकी थिइन्। युक्रेनमा रुसी नीति कहिलेकाहीं तर्कसंगत नदेखिएको हुनसक्छ भन्ने कारणले नै लीक्सले बताइन् । गेरार्ड टाल भन्छन्, ‘सामान्य तर्क यो हो कि पुटिन लामो समयदेखि यस मुद्दामा जुध्दै आएका छन् र अहिले उनलाई यस्तो लाग्छ । अधुरो काम उनको विरासत बन्नेछ त्यसैले यसलाई सदाका लागि ‘सुधार’ गर्न आवश्यक छ।’
‘पुटिनले विश्वास गर्छन् कि पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई रुस विरोधी मञ्चमा परिणत गरेका छन् र यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने। तर, काद्री लेइक टालले जस्तै युक्रेनको संकटलाई भावनात्मक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु जोखिमपूर्ण ठान्छन्।
काद्री लेइक भन्छन्, ‘धेरै विज्ञहरूले त्यसो गर्छन्। मलाई लाग्छ यो खतरनाक दृष्टिकोण हो। यो दृष्टिकोणले सम्पूर्ण संकटलाई पुटिनको क्रोध र आक्रोशमा सीमित गर्छ। हामी पुटिनलाई तर्कहीन निर्णय गर्ने पागलको रूपमा सोच्ने गर्छौं। यो एउटा गल्ती हो। पुटिनको भावना वास्तविक र रूसको भूराजनीतिक संस्कृतिको हिस्सा हो। त्यसैले कुनै पनि रूसी नेताले यो समस्याको सामना गर्नुपर्छ।’
विज्ञहरूले यो पनि विश्वास गर्छन् कि पुटिनको नीतिले उनी आफ्नो जीवनमा केजीबीको जासूस हुनुसँग कुनै सरोकार राख्दैन। निस्सन्देह, पुटिनपछि रसियाको नेतृत्वले यसलाई फरक रूपमा हेर्ने छ। तर, टोलले स्पष्ट रूपमा भन्छन् कि युक्रेनमा रूसी भावनाहरू वास्तविक छन् र हामी यो भन्न सक्दैनौं कि तिनीहरू पुटिनको व्यक्तित्वको अंश मात्र हुन् । -बीबीसी
अर्जुन-मलाइकाको विवाहविरुद्ध यी पाँच अनुहार ११ मिनेट पहिले
निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विशेष प्रस्ताव पास गर्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँगआग्रह २३ मिनेट पहिले
डेढ करोड अनियमितता गरेको आरोपमा फतुवा विजयपुरका प्रमुखविरुद्ध मुद्दा ३६ मिनेट पहिले
दक्षिण अफ्रिकाः सत्र जना मृत फेला परे
ब‌गलादेशमा राष्ट्रिय गौरवको पद्मा पुलः एडीबीले हात झिक्यो, सरकारले बनायाे
भारतले ई-पासपोर्ट जारी गर्ने
मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ सवार हेलिकप्टरमा चरा ठोक्किएपछि...